Hot Laydhka mideyso Line for Steel tuuboyinka - Shiinaha Wan Run Da High Tech
Hot-maquufin mideyso waa hab caan ah oo mideyso alaabta birta, zinc sidaas in la si adag u hogaansamey kartaa on biibiile dibadda iyo gudaha. Ka dib markii mideyso, tuubooyinka bir ma fududa oxidized iyo shaqayn karo wakhti ka sii dheer. shaxda socodka Production ka tuubooyin bir madow in biibiile galvanized waa sida soo socota: talaabo kasta wuxuu leeyahay mishiin gaar ah si ay u dhigma. Qaydhiin steel Black Length wax biibiile biibiilaha: Sida caadiga ah 6 mitir sida dhererka iyo biibiilaha, laakiin sida ay tahay baahida gaarka ah ee wax iibsadaa, waxaan ka dhigi karaan 4 mitir ilaa 8 mitir ...
Hot-maquufin mideyso waa hab caan ah oo mideyso alaabta birta, zinc sidaas in la si adag u hogaansamey kartaa on biibiile dibadda iyo gudaha. Ka dib markii mideyso, tuubooyinka bir ma fududa oxidized iyo shaqayn karo wakhti ka sii dheer. shaxda socodka Production ka tuubooyin bir madow in biibiile galvanized waa sida soo socota: tallaabo kasta wuxuu leeyahay mishiin gaar ah si ay u dhigma. wax cayriin biibiile steel Black Length biibiilaha: Sida caadiga ah 6 mitir sida dhererka iyo biibiilaha, laakiin sida ay tahay baahida gaarka ah ee wax iibsadaa, waxaan ka dhigi karaan 4 mitir ilaa 8 mitir dhererka biibiilaha garaaca. Jidka mideyso: Hot Laydhka mideyso Zinc kululaynta qubeyska: Resistance kulaylinta ama kuleylka shidaalka Capacity Production (Tusaale) Shaxda soo socota ayaa waxa ay muujinaysaa tusaalooyin heerarka wax soo saarka for size kasta oo tuubooyinka BS Dhexdhexaad ah.
Size Norminal Miisaanka biibiilaha Capacity Production
In kg / m Kg / 6.0m pcs./hr.approx kgs / hr.max
Fiiro gaar ah: (1) Si loo isticmaalo wanaagsan iyo dayactirka kidhligii, xawaaraha waa in la dhigay gudahood 8000 kg / hr. (2) On kiiskan, dhererka tube ayaa lagu wadaa sida 6 mitir halkii biibiile. (3) tirooyinka Kor ku salaysan yihiin dul 100% wax soo saarka buuxa. (4) mar darsatid waa qodob weyn marka daahan culus ayaa loo baahan yahay. Laakiin haddii qaadan seylaha waqti aad u dheer, hufnaan wax soo saarka ee lagu dhibta doonaa. Under xaalad isku mid ah shaqada, daahan zinc waxaa ku xiran tahay waqtiga iyo Halabuurka kiimikada steel darsatid. dood faahfaahsan, fadlan noogu soo dir fariin. Ku soo dhawaada si aad u hesho kulul-maquufin mideyso tayo sare leh dhagax for size tuubooyin bir ka yar 2 inch naga. Waxaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha Shiinaha iyo qalabka makiinadaha wax soo saarka kala duwan oo keentay. Ku soo dhawaada si aad u hubiso liiska qiimaha iyo oraahda nala.
Previous: absorber ceeryaamo Acid of kulul lagu rusheeyey line mideyso
Next: mideyso LINE EE tuubooyin bir
Shiinaha mashiinka biibiile galvanized
Shiinaha galvanized khadadka-soo-saarka
Shiinaha maquufin Hot line mideyso
Sii Electroplating mideyso Machine
Sii mideyso Line
Sii mideyso Makiinado
Copper u fududaynaya tuuboyinka Alxanka Machine-saaraha
Qalajiyaha for mideyso Geedaha
Korontada mideyso Qalab
Korontada mideyso Machine
Galvanic Chrome dahaadhay Machine
Fududaynaya daahan Machine
Galvanized Carbon Steel tuuboyinka Machine
Galvanized Carbon Steel tuuboyinka Machine Samaynta
Galvanized Laydhka Pole Production Line
Galvanized Laydhka Pole Production Line Machine
Galvanized Laydhka Pole Production Machine
Galvanized Steel tuubbooyin debacsan biyomareenka Machine
Galvanized Steel tuuboyinka Making Machine
Galvanized Steel Square tuuboyinka Making Machine
Tube Steel galvanized Machine Making Suro
qeybiyeyaasha line mideyso
Mideyso line-soo-saarka, waayo, tuubooyinka
Steel mideyso Machine Tube
Pulse Xawaaraha Sare loo eryay Galvanzing foorno
Dhex Hot Machine galvanized
Dhex Hot Qalabka mideyso
Dhex Hot mideyso Line Waayo Sale
Dhex Hot Machine mideyso
Dhex Hot mideyso Makiinado
Dhex Hot mideyso Plant Waayo Sale
Dhex Hot mideyso Production Line
Hot Laydhka galvanized
Hot Line Production galvanized Laydhka
Hot mideyso Makiinado
Machine Waayo galvanized Steel tuuboyinka
Ciddiyaha Machine galvanized
Tube Round Erw welded tuuboyinka galvanized
Steel tuuboyinka Korontada mideyso Line
Steel tuuboyinka Machine galvanized
Steel tuuboyinka mideyso Line
Steel tuuboyinka mideyso Machine
Tube Steel mideyso Machine
Wire mideyso Lines
Zinc buurka lifaaqan
Zinc mideyso kidhligii
Zinc Hot dhex Machine galvanized
absorber ceeryaamo Acid of kulul lagu rusheeyey line mideyso
Boorka ururinta ee maquufin kulul line mideyso